Silikonyada ugu fiican aquariums -ka: isbarbardhigga iyo hagaha | Ee kalluunka
Natalia Cherry | | DIY Aquariums
Shaki la'aan, silicone -ka aquariums -ka waa aasaaska ay tahay inaan gacanta ku hayno wax kasta oo dhaca, taas oo ah, haddii si lama filaan ah ay dillaac ugu soo baxdo quraaraddayada oo ay bilowdo inay lumiso biyo. Silikoonku waa badeecada ugu fiican ee aan u heli doonno si aan u dayactirno, maadaama ay gabi ahaanba biyuhu biyuhu yihiin oo, haddii si gaar ah loo diyaariyey, aysan waxyeello u geysanayn caafimaadka kalluunkeenna.
Qodobkaan waxaan arki doonaa silikoon aan ku isticmaali karno quraaraddayada, sumadaha iyo midabbada ugu fiican iyo xitaa halka laga gato badeecadaha ugu raqiisan. Sidoo kale, haddii aad xiisaynayso mawduucan oo dhan ee biyo -biyoodka DIY, waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad akhrido maqaalkan kale ee ku saabsan dhisida aquarium-kaaga cusbada.
1 Silsiladda aquarium -ka ugu talinta badan
2 Waa maxay sababta silikoon -biyoodka quraaradu u tahay mid gaar ah oo aadan u isticmaali karin uun silikoon kasta?
3 Silikon dhexdhexaad ah ma ku habboon tahay aquariums -ka?
4 Midabada silicone Aquarium
5 Sida loo adeegsado silikoon aquarium si sax ah
6 Intee in le'eg ayay tahay in silikoon ku jira quraaradda biyaha loo oggolaado inuu engego?
7 Noocyada Silicone -ka Aquarium -ka ugu Fiican
7.6 Weligaa dhis
8 Halkee laga iibsan karaa silicone aquarium -ka jaban
Silsiladda aquarium -ka ugu talinta badan
Si aan khalad ugu dhicin doorashada, hoosta waxaan si toos ah u diyaarinnay qaar ka mid ah silikoonnada aquarium -ka ee lagu taliyay oo aadan wax dhibaato ah ku qabin:
Silikoon geesinimo leh ...
Soudal - Cartridge ...
Aquarium -ka geesiga ah ee ...
Waa maxay sababta silikoon -biyoodka quraaradu u tahay mid gaar ah oo aadan u isticmaali karin uun silikoon kasta?
Silikoonku waa alaabo aad waxtar u leh labadaba dayactirka quraaradda duugga ah ama burburtay ama ururinta mid cusub, iyo sidoo kale dhejinta ama dhejinta qaybaha iyo qurxinta. In kasta oo ay jiraan badeecooyin kale oo fuliya isla shaqadii, silikoonku shaki la'aan waa kan ugu badan ee la isticmaalo, maadaama ay tahay badeecad ku saleysan silikoon iyo acetone oo u adkaysata heerkulka ba'an, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon. Jid ahaan, maaddadani kuma shaqayso aquariums akril, laakiin waa inay ka samaysan yihiin dhalo.
Si kastaba ha ahaatee, dhammaan silikooyinka ganacsi ahaan la heli karo ma aha kuwo ammaan u ah isticmaalka quraaradda quraaradda ah, maadaama ay ku jiraan qaar ka mid ah kiimikooyin ama fungicides kuwaas oo saamayn kara caafimaadka kalluunkaaga. In kasta oo, mabda 'ahaan, haddii sumaddu ku tidhaahdo "100% silikoon" waa calaamad muujineysa inay nabdoon tahay, waxaa fiican inaad doorato badeecad si gaar ah loogu talagalay in lagu isticmaalo aquariums -ka.
Silikon dhexdhexaad ah ma ku habboon tahay aquariums -ka?
Waxaan u qaybin karnaa silikoon laba kooxood oo waaweyn, ha ahaato acetic ama dhexdhexaad. Xaaladda kowaad, waa silikoon sii deynaya asiidhyada waxayna leedahay ur aad u dabeecad leh, oo la mid ah khal. Waxay saamayn kartaa qaar ka mid ah kalluunka, taasna dusheeda waxay qaadataa waqti dheer in la engego.
Silikoon dhexdhexaad ah, dhanka kale, ma sii daayo nooc kasta oo asiidh ah, ma uriso oo si dhakhso ah ayuu u engejiyaa. Mabda 'ahaan, waxaad ugu adeegsan kartaa quraaradda quraaradda ah, in kasta oo aad loogu taliyay inaad iibsato silikoon gaar ah si aad ugu isticmaasho macnaha guud, maadaama qaybaha ay is beddeli karaan inta soo saareyaasha ah. Silikoonnada gaarka ah ayaa si gaar ah loogu talagalay in lagu isticmaalo aquariums -ka, markaa ma heli doontid wax cabsi ah oo lama filaan ah.
Midabada silicone Aquarium
Ilaa iyo inta silikoonka aad iibsanayso uu khaas u yahay aquariums -ka, taas oo ah, taas ha qaadin wax kiimikooyin ah oo halis u noqon kara nolosha kalluunkaaga, doorashada hal midab ama mid kale oo silikoon ah ayaa ah halbeegga bilicsanaanta. Waxa ugu badan (inkasta oo ay jiraan kuwo kale, sida cawl ama bunni) waa midabada silikoon cad, hufan ama madow.
In kasta oo ay tahay shaki la'aan midabka silikoon ee ugu caansanSilicon -ka cad uma muuqdo inuu aad ugu fiican yahay aquariums -ka sababta oo ah midabkiisa (in kasta oo arrimuhu is beddelaan haddii quraaraddaadu leedahay qaab cad, dabcan). Waxaad u adeegsan kartaa inaad ku shaabadeyso tirooyinka saldhigga quraaradda.
Midabka silikoon ee loogu taliyay aquariums -ka waa, shaki la'aan, hufan. Ma aha oo kaliya muhiim ma aha midabka aquarium -kaagu, laakiin wuxuu si fiican ugu dhex milmi doonaa biyaha iyo galaaska. Waxaad u adeegsan kartaa inaad wax ku dhejiso ama aad samayso wax dayactir ah, iyada oo ay ugu wacan tahay midabkiisa aan jirin wax dhib ah ma arki doontid.
Silikoon madow, sida kiiska cad, waa badeecad ku xirnaan doonta dhadhankaaga iyo midabka quraaraddaada. Sida ay yaasyadu sheegaan, waxa wanaagsan ee ku saabsan madowga waa in uu yahay midab aad u dhibban, kaas oo waliba leh waxay noqon kartaa ikhtiyaar wanaagsan haddii aad rabto inaad wax ku qariso ama ku dhejiso qurxinta aag mugdi ah, sida asalka.
Sida loo adeegsado silikoon aquarium si sax ah
Silikoon si aad u fiican ayuu u hagaajiyaa aquariums -ka, laakiin uma adeegsan kartid sida uu yahay, taas bedelkeeda, waa inaad tixgelisaa xaalado taxane ah iyo sida loo sii wado:
Tusaale ahaan, haddii aad iibsatay aquarium gacan labaad ah, hubi inaysan dillaacin oo, haddii ay jiraan, marka hore ku hagaaji silikoon.
Ayaa ka fiican faaruqi quraaradda ka hor intaadan bilaabin, maaddaama oogada sare ee silikoonada la mariyo ay tahay inay nadiif ahaato oo engegto, marka lagu daro, waxay u baahan doontaa inay engegto.
Haddii aadan doonayn inaad faaruqiso quraaradda oo dhan, waad faaruqin kartaa ilaa inta dillaaca dusha lagaga tegayo, in kastoo xaaladdan ay tahay inaad aad uga taxaddar inaadan ku ridin silikoon dareere ah biyaha (Sidaad malayn karto, kuma talineyno haba yaraatee).
Hadaad tagto dayactir galaas oo hore loogu hagaajiyay silikoon, ku nadiifi haraaga hore mindi adeegsi iyo acetone. Si fiican u qallaji intaadan dayactirin.
Silikoonka aad codsaneyso qasab ma aha inay yeelato goobooyinHaddii kale way dillaaci karaan oo waxay keeni karaan daad kale.
Sidoo kale, haddii aad ku biiri doonto laba xabbadood oo galaas leh silikoon, hubi inay jiraan wax u dhexeeya labada. Haddii muraayaddu ay taabato galaas kale way dillaaci kartaa haddii ay yaraadaan ama ballaariyaan isbeddelka heerkulka awgiis.
Dayactirka gudaha bannaanka si silikoonku gabi ahaanba u buuxiyo dildilaaca.
Ugu dambeyntii, ha engego inta aad u baahan tahay.
Intee in le'eg ayay tahay in silikoon ku jira quraaradda biyaha loo oggolaado inuu engego?
Si ay si sax ah ugu shaqeyso, sidaan kuu sheegnay, waa inaad silikoonku si fiican u qalajiso, haddii kale waxay u ekaan doontaa inaadan waxba samayn. Sidaa darteed, aad bay muhiim u tahay inaad ixtiraamto habka qalajinta ee badeecadan, taas oo wuxuu u dhexeeyaa 24 ilaa 48 saacadood.
Noocyada Silicone -ka Aquarium -ka ugu Fiican
Suuqa waxaan ka helnaa a calaamado badan oo silikoon ah, sidaa darteed helitaanka midka ku habboon hawo -biyoodkayagu wuxuu noqon karaa mid aad u xiiso badan. Taasi waa sababta aan ugu arki doonno liiska ugu badan ee lagu taliyay:
Silicon Olivé waa a classic in dunida dhismaha. Laynka aquariums -ku wuxuu u taagan yahay inuu yeesho engejin degdeg ah, dhejin wanaagsan iyo dabacsanaan. Intaa waxaa dheer, waxay si fiican u diidaan gabowga, sidaa darteed sheygu wuxuu socon doonaa sanado badan isagoo shaqadiisa qabanaya. Sida dhammaan silikoonnada noocan ah, badeecadani waxay ku habboon tahay dhalada dhajinta.
Calaamadan xiisaha leh waxay xayeysiisaa in badeecadeeda, gaar ahaan loogu talagalay aquariums -ka, ay tahay adkaysi u leh cadaadiska biyaha oo la jaan qaadi kara biyaha cusbada leh. Waa mid hufan oo, maadaama ay ku habboon tahay dhalada, waxaad hagaajin kartaa aquariums -ka, haamaha kalluunka, aqalka dhirta lagu koriyo, daaqadaha ... marka lagu daro, waxay ka hortagtaa shucaaca UV nalalka, sidaa darteed ma waayi doonto raacitaankiisa.
Soudal wuxuu u taagan yahay inuu noqdo badeecad hufan oo ku habboon aquariums -ka, kaas oo lagu xayeysiinayo inuu si gaar ah ugu adkaysan karo isbeddelada heerkulka. Waxay u shaqaysaa oo kaliya inay ku xidho dhalada galaaska, sida silikoonada badankood, lamana rinjiyeyn karo. Waxay leedahay heer aad u fiican oo adhesion ah.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan badeecadaha sumaddan ayaa ah, marka lagu daro in si gaar ah loogu talagalay aquariums -ka, cannulaku wuxuu leeyahay cannula la dhisay oo la gelin karo meelo badan oo kala duwan, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dayactirka dildilaaca ugu yar iyo inaan la isticmaalin qoriga. Waxaa sii dheer, si dhakhso ah ayay u qallashaa waxayna ka hortagtaa dhammaan noocyada kala daadashada.
Wax alaab ah lama helin.
Waxaanuna ku dambaynaynaa nooc kale oo aad loogu taliyay, kaas oo aan soo saarin oo keliya silikoon loogu talagalay aquariums -ka, laakiin sidoo kale aad ayaa loogu adeegsadaa goobta xirfadda. Silicon wurth wuxuu u taagan yahay qalajinta si dhaqso leh, oo aan foolxunayn waqti ka dib, iska caabinta heerkulka sare iyo kan hoose iyo inuu aad u dheggan yahay. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad taxaddar samaysaa inta aad qallajinaysid oo aad silikoonada ku hayso heerkulka ku qoran dhalada.
Calaamadan ganacsiga Takhasuska alaabta DIY Waxay leedahay silicone aad iyo aad u wanaagsan oo loogu talagalay aquariums -ka. Waxay u taagan yihiin waqtigeeda qallajinta degdegga ah, iyo sidoo kale inay la jaan qaadayaan oo keliya dhalada, laakiin sidoo kale aluminium iyo PVC. Waa hufan, kuma jiraan fungicides waana sahlan tahay in la dalbado, taasoo ka dhigaysa ikhtiyaar aad loogu taliyay.
Silikoon gaar ah oo loogu talagalay aquariums -ka sumaddan sidoo kale dibedda ayaa loo isticmaali karaa, maadaama ay adkaysi u leedahay biyaha iyo cimilada. Waxay leedahay ur la aqbali karo, aad bay u laastiif tahay guud ahaanna aad bay ugu dheggan tahay dhalada, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon dayactirka ama dhisidda biyo -biyoodka.
Halkee laga iibsan karaa silicone aquarium -ka jaban
Waxaa jira a meelo badan oo kala duwan oo aan ka iibsan karno silikoon -biyoodka, maadaama iibkeedu uusan ku koobnayn dukaamada xayawaanka, laakiin sidoo kale waa suurtogal in laga helo meelo ku takhasusay DIY iyo dhisme.
Marka hore, gudaha Amazon waxaad ka heli doontaa tiro la yaab leh oo ah noocyada silikoon. Intaa waxaa dheer, waxaad la tashan kartaa fikradaha isticmaaleyaasha kale si aad u ogaato oo aad u doorato silikonka ku habboon baahiyahaaga. Oo haddii aad qandaraaska Ra'iisul -wasaaraha qaadatay, waxaad guriga ku haysan doontaa waqti aan dheerayn.
Leroy Merlin Ma laha noocyo kala duwan oo xad -dhaaf ah, dhab ahaantii, boggeeda internetka waxay kaliya leedahay laba silikoon oo gaar ah oo loogu talagalay aquariums -ka noocyada Orbasil iyo Axton. Waxyaabaha xiisaha leh ayaa ah inaad hubin karto haddii laga heli karo dukaanka jirka, wax aad waxtar u leh si looga baxo degdegga.
Goobaha dukaamaysiga sida isgoyska Waxay sidoo kale leeyihiin noocyo silikoon ah oo la heli karo, in kasta oo aan la cayimin haddii ay yihiin aquariums -ka. Si kastaba ha noqotee, waxaad eegi kartaa tilmaamaha oo aad dooran kartaa inaad ka iibsato jidh ahaan ama internetka adoo adeegsanaya Suuqa, oo ah ikhtiyaar aad u xiiso badan.
En Bricomart Waxay leeyihiin sealant gaar ah oo loogu talagalay aquariums -ka, ugu yaraan onlayn, laga soo bilaabo astaanta Bostik. Sida shaqooyinka kale ee la midka ah, waxaad ka hubin kartaa helitaanka dukaanka kuugu dhow, soo qaado ama ka iibso internetka.
Ugu dambeyntii, gudaha Bauhaus Waxay kaloo leeyihiin hal silikoon oo hufan, gaar ah oo loogu talagalay aquariums -ka iyo terrariums -ka, oo aad ka heli karto onlaynka iyo dukaamadooda jirka. Waxay u shaqaysaa si la mid ah websaydhada kale ee DIY, maadaama aad ka dalban karto onlaynka ama aad ka soo qaadan karto dukaanka.
Silicone for aquariums -ku waa adduun dhan oo, shaki la'aan, ay tahay in la xakameeyo si aanan nalooga ilaalin marka aquarium -kaagu dalool leeyahay. Noo sheeg, waligaa ma kugu dhacday? Waa maxay waayo -aragnimada aad ku lahayd silikoon? Ma jeceshahay astaan ​​gaar ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » DIY Aquariums » Silikoon Aquarium
CO2 loogu talagalay aquariums -ka